၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးအမေရိကန်မြို့ကြီးများ
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » USA မှ Breaking News » ၂၀၂၁ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးအမေရိကန်မြို့ကြီးများ
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • အချက်အပြုတ် • ယဉျကြေးမှု • ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ • သတင်း • တာဝန်ရှိသော • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွားလာရေးဟောပြောချက် • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားလျှို့ဝှက်ချက်များ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • USA မှ Breaking News • သတင်းမျိုးစုံ
ဇြန္လ 29, 2021
၄၈ အတွက်အမေရိကန် ၄၈ သန်းသည်အိမ်မှ ၅၀ မိုင်အကွာမှအိမ်မှထွက်ခွာသွားမည်th ဇူလိုင်လ၏။
အမေရိကန်များကဒေါ်လာ ၄.၅ ဘီလီယံကိုသုံးစွဲရန်စီစဉ်ကြသည်th ဇူလိုင်လအစားအစာ၏။
၆၄% သောအမေရိကန်များသည်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ငွေရေးကြေးရေးအရအမှီအခိုကင်းသည်ဟုခံစားကြသည်။
အမေရိကန်များအနေဖြင့်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၇.၅ ဘီလီယံသုံးစွဲရန်စီစဉ်ထားသည်th ယခုနှစ်ဇူလိုင်လအထိမ်းအမှတ်နေ့များမှယနေ့ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများကဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကျင်းပခြင်းအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံး & အဆိုးဆုံးနေရာများနှင့် Coronavirus နှင့် ၄ ရက်ရှိအားလပ်ရက်များနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များတင်ပြခဲ့သည်။th ဇူလိုင်လစစ်တမ်း၏။
ကြယ်ပွင့်အများဆုံးပွဲတော်ကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးနေရာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူများကအားလပ်ရက်စရိတ်နှင့်ပျော်စရာမည်မျှကိုမျှမျှတတရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးမြို့ ၁၀၀ ကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အဓိကမက်ထရစ် ၂၃ ခု၏အချက်အလက်အစုသည်ပျမ်းမျှဘီယာနှင့် ၀ ိုင်စျေးနှုန်းမှမီးရှူးမီးပန်းများကြာချိန်အထိဇူလိုင်လ၏စတုတ္ထမြောက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်အထိရှိသည်။
ဇူလိုင်လ ၄ ရက်ကိုကျင်းပရန်အကောင်းဆုံးမြို့များ
1. နယူးယောက်, နယူးယော့ 11. New Orleans, LA က
2. ဆန်ဖရန်စစ္စကို, CA 12. Las Vegas မှ, NV
3. ချီကာဂို, IL ၁၃။ Buffalo၊ NY
4. Minneapolis, MN 14. Orlando တွင်, FL
5. အတ္တလန်တာ, GA ၃
6. Los Angeles မြို့, CA 16. စိန့်လူးဝစ်, MO ကို
7. ဆီယက်တဲလ်, WA 17. ဟိုနိုလူလူ၊
8. ဝါရှင်တန်ဒီစီ ၁၈။ Milwaukee, WI
9. San Diego မှ, CA 19. Dallas ရှိ TX
10. စိန့်ပေါလု, MN 20. Philadelphia တွင်, PA ဆိုပြီး
ဇူလိုင်လအချက်အလက်များ & ကိန်းဂဏန်းများ၏ 4th
ဒေါ်လာ ၂၁.၆ ဘီလီယံ အမေရိကန်များသို့ ၄ ဒေါ်လာသုံးစွဲရန်စီစဉ်ထားသောပမာဏth ဇူလိုင်လအစားအစာ၏။
၂၃.၆ သန်း တစ်ခုချင်းစီကိုစားသောခွေးကောင်အရေအတွက်က 4th ဇူလိုင်လ၏။
ဒေါ်လာ ၁.၄ + ဘီလီယံ အမေရိကန်များသို့ ၄ ဒေါ်လာသုံးစွဲရန်စီစဉ်ထားသောပမာဏth ဇူလိုင်လဘီယာနှင့်ဝိုင်၏။
80%။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသောလူထုမီးရှူးမီးပန်းများပြသခြင်း။
ဒေါ်လာ ၁.၄ + ဘီလီယံ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်မီးရှူးမီးပန်းသုံးစွဲရန်ခန့်မှန်းထားသောပမာဏ (မီးပန်းဒဏ်ရာ ၇၃% သည်ဇူလိုင် ၄ ရက်တစ်လအတွင်းဖြစ်ပွားသည်) ။
ဒေါ်လာ ၁၃၀ သန်း နှစ်စဉ်အမေရိကန်အလံ၏တန်ဖိုး။
၂၃.၆ သန်း (၄) အတွက်အိမ်မှမိုင် ၅၀ ကျော်ဝေးသောလူ ဦး ရေth ဇူလိုင်လ၏။
ခရီးသွားလာသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်များ ၃၇% ပိုမိုခရီးသွားကြလိမ့်မည်။
မီးရှူးမီးပန်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်၏ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရများသည်ယခုနှစ်မီးရှူးမီးပန်းများအတွက်အခွန်ထမ်းဒေါ်လာကိုအသုံးပြုသင့်သည်ဟုမထင်ကြပါ။
ဘဏ္independenceာရေးလွတ်လပ်မှုကြေညာ။ ၆၄% သောအမေရိကန်များသည်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ငွေရေးကြေးရေးအရအမှီအခိုကင်းသည်ဟုခံစားကြသည်။
အသုံးစရိတ် vs. သိမ်းဆည်း။ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်များကငွေစုဆောင်းခြင်းသည်သုံးစွဲခြင်းထက် ပို၍ မျိုးချစ်စိတ်ပိုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်အသုံးစရိတ်များ။ အမေရိကန်များ၏ ၃၆% သည်ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းစာလျှင်ပိုမိုပိုက်ဆံဖြုန်းနေကြသည်။
၃၆% သောအမေရိကန်များသည် ၄ ​​ခုတွင်ပိုမိုငွေများသုံးစွဲရန်စီစဉ်ကြသည်th ဇူလိုင်လ၏ယခုနှစ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဒါကလူတွေဒီနှစ်အားလပ်ရက်အတွက်အတူတကွစုရုံးဖို့ပိုများပါတယ်၊ လူမှုရေးအရဝေးလံခေါင်ဖျားမှုကပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကဖြစ်သည်။ လူများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကခရီးသွားလာခြင်းမှစိတ်ဓာတ်ကျနေစဉ် ၄th ဇူလိုင်လတွင်အမေရိကန်သည်ယခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်သို့ ၃၇% ပိုလာမည်။
အားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်သတင်းမှာ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်များသည်ငွေရေးကြေးရေးအရအမှီအခိုကင်းသည်ဟုခံစားကြရသည်th COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုမှကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်နာလန်ထူနေကြောင်းပြသသောဇူလိုင်လမှပြပွဲဖြစ်သည်။ လူအများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပံ့ပိုးရန်အစိုးရမှပြုလုပ်သောလှုံ့ဆော်မှုတိုင်းတာမှုမရှိပါကငွေရေးကြေးရေးအရအမှီအခိုကင်းသည့်လူ ဦး ရေမှာများစွာလျော့နည်းသွားနိုင်သည်။
၆၂ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ယုံကြည်မှုသည်ငွေစုဆောင်းခြင်းသည်ယခုအချိန်တွင်သုံးစွဲခြင်းထက် ပို၍ မျိုးချစ်စိတ်ပိုသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငွေစုဆောင်းမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်သူများသည်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံများကဲ့သို့သောအခြားအရေးကြီးသောအရာများအတွက်တိုင်းပြည်အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုလွတ်မြောက်စေသည့်အစိုးရ၏ထောက်ခံမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ပိုက်ဆံဖြုန်းခြင်းသည်လည်းမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်စီးပွားရေးကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးတိုင်းပြည်ကြီးထွားစေရန်ကူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်များ၏ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရဒေသန္တရအစိုးရများသည် ၄ ​​င်းမီးပန်းများကိုပြသရန်အခွန်ထမ်းဒေါ်လာကိုအသုံးပြုသင့်သည်th ဇူလိုင်လ၏။ သူတို့က4၏အဓိကစဉ်းစားနေစဉ်th ဇူလိုင်လကျင်းပသောအခမ်းအနားများ၌မီးရှူးမီးပန်းများသည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမှပြန်လည်သက်သာလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အခွန်ဒေါ်လာသည် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများသို့သွားသည်ကိုလူများကမြင်ကြသည်။
လျင်မြန်သောဆုလာဘ်အပိုဆုအမှတ်များနှင့်ကာဗွန် offset ကမ်းလှမ်းမှု
SATW ဖောင်ဒေးရှင်းက ၂၀၂၁ Lowell ဆုရရှိသူများကိုကြေငြာသည်။
၂၀၂၀ တွင်လေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းများဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိ ...
တာလီဘန်တို့ထံမှဒေါ်လာ ၁၂.၃ သန်းတန်ငွေနှင့်ရွှေများကိုသိမ်းယူခဲ့သည်။
ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းကြောင့် New Orleans ဒေသခံများကိုဘေးလွတ်ရာသို့ရွှေ့ပြောင်းရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
CHICOS ၁၀ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Bahamas သို့ပြန်သွားရန်
Alaska လေကြောင်းလိုင်းသည် San Francisco Giants ကို ဦး တည်သော ...
ပါလက်စတိုင်းမှ St Kitts and Nevis သို့ဗီဇာကင်းလွတ်သောခရီးသွား ...
IUCN ကမ္ဘာ့ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ဂရက်: ရေရှည်တည်တံ့သောအသစ် ...
Bahrain Exhibition & Convention Center တွင်နေရာအသစ်တစ်ခုရှိသည်။
The St.Regis San Francisco မှလက်ရာမြောက်သောသစ်များကိုကြေငြာသည်။
Nordwind လေကြောင်းလိုင်းသည်တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုကို St ...
တောင်အာဖရိကတောင်ပိုင်းသည် United Airlines နှင့်ပျံသန်းနေပြီဖြစ်သည်။
ဘဟားမားစ်နိုင်ငံအခြေစိုက် Coral Vita သည်ကျော်ကြားသောမင်းသားကိုအနိုင်ယူသည်။
Aha- Reno – Tahoe အခြေစိုက် Nevada လေကြောင်းလိုင်းအသစ်
ရေဒါမရှိဘူးလား။ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ကဘူးလ်လေဆိပ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ...
Rajasthan သည်ခရီးသွားများအားမကောင်းသောအပြုအမူကိုရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်စေသည်
P&O Cruises Australia သည်ဆစ်ဒနီတွင်ခေတ္တရပ်နားသည်။
China Eastern လေကြောင်းလိုင်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် IATA အစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပရန် ...
တတိယမြောက် COVID Shot အတွက် CDC ၏အန္တရာယ်အစီရင်ခံစာအသစ်
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု ၉၀% ကိုအဆုံးသတ်ရန်ပစ်မှတ်ထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် COVID-19 Surge သို့မျက်မမြင်: Phuket Sandbox ကိုတွန်းပို့သည်
အာဖရိကအသစ်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်စပ် - နိုင်ဂျီးရီးယားအပေါ်ဆွေးနွေးခြင်း ...